Uncategorized Archives - Celefans
September 9, 2021 Cele Fans Comments Off on NUG နဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို စာနာနားလည်ကြောင်း အထူးအကြံပေးကောင်စီပြော
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က ခုခံတွန်းလှန်စစ် ဆင်နွှဲဖို့ ကြေညာလိုက်တာဟာ စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပေမယ့်၊ အာဏာသိမ်းပြီး ၇ လအတွင်း စစ်တပ်ရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ချေမှုန်းမှုတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းက အရေးယူမှု မရှိတာတွေအပေါ် NUG နဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အားမလိုအားမရ ဖြစ်မှုကို မိမိတို့ နားလည်သဘောပေါက်ပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးကောင်စီ (SAC-M) က စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုဟာ မြန်မာပြည်သူတွေ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်း […]
D Day ဘာကြောင့် မစ နိုင်သေးသလဲ/ နှောင့်နှေးနေသလဲ
September 3, 2021 Cele Fans Comments Off on D Day ဘာကြောင့် မစ နိုင်သေးသလဲ/ နှောင့်နှေးနေသလဲ
R2P ထက် K2K သာ အားကိုး တိုက်စို့ [ D Day ဘာကြောင့် မစ နိုင်သေးသလဲ/ နှောင့်နှေးနေသလဲ ] အသိတယောက်ကတော့ပြောတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးNUGကချဟေ့သာတခွန်းထဲပြောတဲ့နပတအထိတက်သိမ်းမယ်လို့EAOsတွေကပြောတယ်ဆိုတယ်လက်နက်ကျည်ကုန်မှာမကြောက်နဲ့မလိုဘူးတဲ့ဟုတ်မဟုတ် NUGသာမေးကြတော့ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ပအချိန်ပဲခူးနားရောက်ပြီးရကဝင်ဖို့NUGကခွင့်မပြုလို့ပြန်လှည့်လိုက်ရတယ်ဆိုတယ်(ပြည်သူအထိနာမှာစိုး၍)ခုလည်းEAOsတွေကဆော်ချင်နေပြီNUGရဲ့အခေါ်ပဲစောင့်နေတယ်လို့ကြားတာပဲနောက်ကြားတာတခုရှိသေးတယ်ဒါကတော့ကြားစကားပါအရေးလည်းကြီးတယ် (ချင့်ယုံပါမှားနိုင်သည်)DDayမ‌စသေးခြင်းဟာအခြားကြောင်းတွေရှိပေမယ့်ပြည်တွင်းEAOsတွေနဲ့စလို့နိုင်ခဲ့ရင်EAOsတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုNUGကအပြည့်ဝလိုက်နာလုပ်ဆောင်ပေးရမှာစိုးလို့ပြည်ပနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပသေချာကိုင်ပင်ကိုက်မှDDayကိူစမည်ဟုလုပ်နေပုံရနေသည်တဲ့ (ထိုကြားစကားမှားနိုင်ပါသည်အကြောင်းကယခုပင်NUGနဲ့EAOsတွေနိုင်ငံအတွက်စစ်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်း‌‌ဆောင်ရွက်ထားပြီမဟုတ်ပါလား) ထိူစကားမှန်မမှန်ထက်အကယ်၍ ဟုတ်ခဲ့လျင်လည်းသိပ်မစိုးရိမ်ရပါဘူးဟု အကြောင်းကထိုပလန်ကိုရိပ်မိသိရှိလို့လား DDayမစသေး၍လားမသိ/စချင်နေသော ကချင်သူရဲကောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကတော့ NUGနဲ့မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးကိုအသိပေးကြေငြာပြောထားပြီပါပြီဒါကဘာလဲဆိုရင်”ယခုတော်လှန်ရေးမှာတိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်လုပ်နေကြပေမယ့်သူတိူ့အခွင့်အရေးပိုမယူပါဘူးတဲ့”(ကချင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကြေငြောပြောစကားအားပြန်ကြည့်ပါ)သဘောကယခုလည်း K2Kဟာထိပ်ဆုံးကနေရပ်တည်ပြီးပွဲစကနေအဆုံးထိမရပ်မနားတိုက်စစ်ဖွင့်တိုက်နေပေမယ့်တိုင်းပြည်အတွက်တော်လှန်ပေးဆပ်နေပေမယ့်နိုင်ငံပြန်ထူထောင်တည်ဆောက်တဲ့အခါကြသူတို့ပေးဆပ်တိုက်ပေးရတယ် အသက်ပေးရတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးမှာအခွင့်အရေးပိုမယူပဲအားလုံးနဲ့ထပ်တူသာတူညီမျှသာရပိုင်ခွင့်ကိုခွဲဝေရယူကြမည်ဖြစ်ကြောင်းအတိလင်းအသိပေးကြေငြာလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီစကားအသွားလာဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်EAOsတွေဟာတိုင်းပြည်အတွက်တော်လှန်ပေးဆပ်နေရပေမယ့်အောင်မြင်ခဲ့ရင်နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအပေါ်အခွင့်အရေးတပြားသားမှပိုမယူပဲတန်းတူညီမျှသာတူညီမျှသာပူးပေါင်းညီညွတ်စွာစည်းလုံးတည်ဆောက်သွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေငြာခြင်းဖြစ်ပြီး NUGနဲ့ပြည်သူကိုစကစကိုအမြစ်ဖြတ်ဖို့DDayအမြန်စသင့်ကြောင်းလဲအသိပေးပြောခြင်းသာဖြစ်သည့်အတွက်ပြောသည်ဟုယုံကြည်၍ NUG+EAOs+PDF+GZပြည်သူတို့ပေါင်းပြီ းDDayတိုက်ပွဲကို အမြန်အကောငိထည်ဖော် အစပျိုးသင့်ကြောင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို […]
ဆေးခါးကြီးပင်ဖြင့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဖော်စပ်ရန် စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ညွှန်ကြား
September 3, 2021 Cele Fans Comments Off on ဆေးခါးကြီးပင်ဖြင့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဖော်စပ်ရန် စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ညွှန်ကြား
မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးများတွင် အသုံးပြုသည့် ဆေးခါးကြီးပင်များဖြင့် ကိုဗစ် ရောဂါကာကွယ်ဆေးများ ဖော်စပ်ကြရန် စစ်ကောင်စီခန့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းက ညွှန်ကြားလိုက်သည်။ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်က ပြုလုပ်သည့် ကိုဗစ် ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးဆိုင်ရာ စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းက ညွှန်ကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီထုတ် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ “မာဓဝနိဒါန်း ဆေးကျမ်းတွင်လည်း ဝိသမအဖျားအမျိုးမျိုးအတွက် ဆေးခါးကြီးပါဝင်သော တိုင်းရင်းဆေးဖုံဖြင့် ဖော်စပ်အသုံးပြုထားသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့သော တိုင်းရင်းဆေးများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်၍ ကိုဗစ် […]
NLD ပါတီကိုဖျက်ဖို့​တော့ မကြိုးစားနဲ့လို့ ​ပြောလိုက်တာပဲ မအလ​ရေ.
August 28, 2021 Cele Fans Comments Off on NLD ပါတီကိုဖျက်ဖို့​တော့ မကြိုးစားနဲ့လို့ ​ပြောလိုက်တာပဲ မအလ​ရေ.
ဒီ​လောက်ဆို သ​ဘော​ပေါက်သ​ဘောမ​ပေါက်ရင် ​ကျော​ပေါက်သွားမယ်…​ကျော​ပေါက််တယ်ဆိုတာ​​နောက်​ကျောဘက်က ပစ်လိုက်တဲ့ကျည်​ကြောင့်​ကျောမှာ အ​ပေါက်ကြီးဖြစ်သွားမှာကို ​ပြောတာ… တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ထံသို့ ကျေးဇူးတင်လွှာပေးပို့ သို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ရန်ကုန်လို့ လိပ်မူပြီး နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ ပေကျင်းကနေ ကျေးဇူးတင်လွှာ တစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှစ် (၁၀၀) ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အပေါ် ဝမ်းမြောက်ကြောင်းသဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့ အပေါ် ကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ […]
ရုရှားဟာ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအတွက် အရေးပါတဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်လာနေ
August 27, 2021 Cele Fans Comments Off on ရုရှားဟာ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအတွက် အရေးပါတဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်လာနေ
ရုရှားနိုင်ငံက မြန်မာစစ်တပ်ကို လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ် လက်နက်တွေကို အချိန်မီပို့ပေးမယ်လို့ ရုရှားစစ်ဘက်နည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်းအကြီးအကဲက ပြောဆိုကြောင်း သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ က ရုရှား သတင်းဌာနတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ Army 2021 လက်နက်ပြပွဲနဲ့ International Army Games ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ကြည်းရေလေ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေး ရောက်ရှိနေချိန်မှာပဲ အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရပ်သားအစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လက်မခံဘဲ အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့စစ်တပ်ဟာ […]
တပ်မတော်အတွင်း တန်ပြန်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ရန် တာစူနေပြီလား..?
August 23, 2021 Cele Fans Comments Off on တပ်မတော်အတွင်း တန်ပြန်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ရန် တာစူနေပြီလား..?
တပ်မတော်အတွင်းတန်ပြန်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ရန်တာစူနေပြီလား? မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အရင်ဦးဆုံးအာဏာသိမ်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတာကတော့ တပ်မတော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တာကိုတော်တော်များများသတိမူမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကယ်တမ်းကျတော့ အာဏာသိမ်းမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတိုင်းဟာ အာဏာသိမ်းမှုမဖြစ်ခင်မှာ စစ်တပ်ကိုအရင်ဆုံးအာဏာသိမ်း ကြရပါတယ်။ တပ်ထဲမှာ မိမိရဲ့သြဇာကို ဖီဆန်မည်ဟုထင်ရသူများကိုနေရာအပြောင်းရွှေ့လုပ်ပြီး ချောင်ထိုးခြင်း၊ သစ္စာခံမည့်သူများကို အရေးပါသည့်နေရာများသို့ ရွှေ့ပြောင်းခန့်ထားခြင်း ပြုလုပ်ပြီး မိမိရဲ့အာဏာတည်မြဲကျစ်လစ်အောင် တပ်တွင်းအာဏာသိမ်းမှုကို အရင်ဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ ယခင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ နဲ့တစ်ကွ အခြားဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းများရဲ့ ထောက်ခံမှုနဲ့အတူ မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ တပ်မတော်ကို အာဏာသိမ်းမှုကောင်းစွာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ […]
ရှေ့လဲတိုးမရ နောက်လဲဆုတ်မရတော့တဲ့ သာဝတစ်ယောက် ကျားစားခံရတော့မည့်အခြေအနေရောက်
August 22, 2021 Cele Fans Comments Off on ရှေ့လဲတိုးမရ နောက်လဲဆုတ်မရတော့တဲ့ သာဝတစ်ယောက် ကျားစားခံရတော့မည့်အခြေအနေရောက်
ကျားဖင်နိူက်လိုက်တဲ့စကစ(ရှေ့လဲတိုးမရ နောက်ပြန်လဲမဆုတ်ရဲတေ ာ့တဲ့ သာ၀တစ်ယောက် ကျားစားခံရတော့မည့်အခြေအနေဆိုဒ်ရောက်) ဧရာဝတီ အယ်လီတာချုပ် ကိုအောင်ဇော်ကတော့ မင်းအောင်လိူင်အာဏာသိမ်းတာ ကျားမြီးကိုဆွဲလိုက်တာလို့ ပြောတယ်.သဘောကတော့ မလွတ်အောင်ဆွဲ လွတ်တာနဲ့ အစားခံရမယ် ဆိုတဲ့သဘောပေါ့. ကျနော်ကတော့ မင်းအောင်လိူင် အာဏာသိမ်းတာကျားမြီးဆွဲတယ်လို့မထင်ဘူးကျားဖျင်ပြေးနိူက်တယ်ပဲ ထင်တယ်။ဟုတ်တယ် အခုဆို သူ့ဘယ်နိုင်ငံကမှလဲလက်မခံinvestment တွေကလဲမရှိ တရုတ်ကလဲ သူ့နိုင်ငံရေးအတွက် ဂျပုတို့ကိုလိုသလိုကစားနေ အာစီယံကလဲUSဖိအားနဲ့ကျပ် ရုရှကလဲ ဂျင်းထည့်ကောင်းအောင် ဖောလိုလိုက်ရုံပဲလိုက်ပြည်တွင်းကျတော့လဲ မငြိမ် နေရာတိုင်းမှာ သေနတ်တွေကိုင် ရေရှည်အုပ်ချုပ်မရ အုပ်ကြီး ပျုဆောထီးဒလန်တွေလဲ […]
နယ်မြေခံတပ်ရင်းတွေဘဝက ခြံထဲက ကြက် ဘဝ ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာပြီ
August 18, 2021 Cele Fans Comments Off on နယ်မြေခံတပ်ရင်းတွေဘဝက ခြံထဲက ကြက် ဘဝ ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာပြီ
ပူတင်က ဥရောပမှာ လူသတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ပြီး အမေရိကမှာ ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်တယ်။ ဒါတွေကို ဘိုင်ဒန်က ပူတင်နဲ့တွေ့တော့ လူယဉ်ကျေးတစ်ယောက် လေသံနဲ့ ပူတင်လည်း အရှက်မကွဲအောင် ငြင်သာယဉ်ကျေးပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ကြိမ်းလွှတ်လိုက်တယ်။ ဒါကို ကေဂျီဘီဟောင်း ပူတင် ချက်ချင်း နားလည်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် အမေရိကရဲ့ မဟာရန်သူ အဆင့်တောင် မရောက်သေးတဲ့ မအလကိုတောင် မတွေ့ဘူးဆိုတာ စာထုတ်ပြီး ကြေငြာခဲ့တယ်။ ဒါကို နားမလည်တဲ့ မအလတို့တစ်ဖွဲ့ […]